Njem Nleta Ụsọ Oké Osimiri Sorrento Na -agbago Mgbe Nkwụsị Ọrịa Nanị gasịrị
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akwụkwọ akụkọ Italy » Njem Nleta Ụsọ Oké Osimiri Sorrento Na -agbago Mgbe Nkwụsị Ọrịa Nanị gasịrị
Na -agbasa Akụkọ Europe • Na-agbasa News Travel • culinary • omenala • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • Akwụkwọ akụkọ Italy • News • Iwughachi • Tourism • Mmelite nke Njem njem • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche
Oké osimiri Sorrento - Foto © Mario Masciullo
Oké osimiri Sorrento, otu n'ime njem nlegharị anya Italiantali ole na ole, na mgbakwunye n'ụsọ Oké Osimiri Amalfi, nke mere ka ndị edemede na ndị na -ede uri nke Grand Tour dị n'etiti narị afọ nke 18 na 19, na -eme ka ndị ọbịa mba ofesi, ruo oge ajọ ọrịa, dere. jiri nwayọ gbakee n'oge ọkọchị nke 2021.
Ụsọ mmiri Sorrento adọtala ọkachasị ndị njem nlegharị anya Italiantali na ndị mba ọzọ ole na ole.
Agbanwela ọnọdụ a kpam kpam kemgbe 1919 na ọ bụ mgbake ihere na -echere ịlaghachi n'oge gara aga.
Oge efu n'ihi ọrịa na -efe efe agbanwebeghị njirimara na ọdịnala dị na Sorrento na ọmarịcha obodo ya.
Karịsịa, onyinye nri ụmụ amaala nke ụlọ oriri na ọ traụ traụ na Sorrento na obodo ndị gbara ya gburugburu, na mgbakwunye na ụlọ oriri na ọ runụ runụ ndị isi kpakpando dị ka Il Buco na Donna Sofia, nke ikpeazụ kacha amasị akara ngosi sinima nke Sofia Loren, ka na -atọ ụtọ mgbe.
Ọ dabara nke ọma, ihe niile anaghị agbanwe agbanwe maka abamuru nke ndị ọbịa oge niile na -enwe obi ụtọ ịhụ ndị na -ahụ maka ebe a na -eri nri bụ ndị ghọrọla enyi ka oge na -aga wee chọpụta menus ochie. Nke a bụ ụdị nkwanye ugwu maka abamuru nke ọgbọ ọhụrụ, nke edere ọnụnọ ha na ngwụsị July.
Nlele ụlọ nkwari akụ Mediterraneo na mpaghara igwu mmiri nkeonwe ya - Foto © Mario Masciullo
Omenala ụlọ oriri na nkwari akụ na Sorrento
Obodo Sorrento depụtara ụlọ oriri na nkwari akụ 120/30, ọkachasị ndị ezinụlọ na-eme-ọdịnala enyerela kemgbe ihe karịrị otu narị afọ. N'ime oge a, ọnụ ọgụgụ dị mma nke ihe owuwu abụrụla ebe obibi ama ama maka ahụmịhe njikwa yana ntinye akụ na ụba sitere na njem na ihe ndị ọzọ.
MD na Pietro Monti, Hotel Mediterraneo, Sorrento - Photo © Mario Masciullo
Akụkọ gbasara mmasị
Akụkọ na -akpali mmasị mere ka Sergio Maresca, onye isi nchịkwa (MD) nke Hotel Mediterraneo, onye ọdịnala ogologo oge nke ile ọbịa na mgbanwe ọgbọ na -adịru ihe karịrị otu narị afọ, ma bụrụ nke a na -ekewa dị ka “akụkọ ikpe”.
Na mbụ, ụlọ nkwari akụ a bụ ụlọ obibi nkeonwe wuru na 1912 ma Antonietta Lauro, “nne nne Etta,” nwanne nwanyị nwe ụgbọ mmiri Achille Lauro, nne nne na nne nke ndị na-elekọta ụlọ nkwari akụ ahụ ugbu a.
“Ọtụtụ ọgbọ enweela ihe ịga nke ọma na ndị mmekọ ezinụlọ ọhụrụ esonyela azụmaahịa a, mana mmụọ ile ọbịa ka bụ otu. Maka anyị, nke a na -abụkarị nnukwu ụlọ nke na -akwado ezi ndị ezinụlọ anyị na ndị anyị na ha na -arụkọ ọrụ ọnụ na ndị ahịa ọhụrụ na ndị enyi anyị, "MD ụlọ nkwari akụ ahụ kwuru.
Dị ọhụrụ ka Ihu Ọdịnihu
Inye nkwado sitere na iwu Invitalia banyere nhazigharị nnukwu ụlọ oriri na nkwari iri na abụọ na Sorrento. Ebumnuche nke ọrụ a bụ iwelite ogo ụlọ oriri na ọ hotelụ hotelụ site n'ikenye ndị na-achọ akwụkwọ onyinye na-akwụghị ụgwọ na mgbazinye ego.
Agwaetiti Sorrento, n'etiti ihe ndị ọzọ, bara uru n'ihe gbasara ọbịbịa ihe dịka 15% nke ọwa Campania na 30% nke mpaghara Naples, yana ihe ruru 0.75% nke ngagharị njem nkwari akụ mba niile.
N'akụkụ a, ọchịchọ ịmata ihe kpaliri nyocha n'ime okwu a site n'ịgba ajụjụ ọnụ Pietro Monti, onye isi ahịa ahịa nke naanị ihe karịrị otu narị afọ na mpaghara Sorrento, nke MD kwuru maka ya, nke ahụ bụ onye ga-erite uru na nhazi mmegharị ahụ.
Mbinye ego ahụ, dị ka Piero Monti si kwuo, etinyela ego iji meziwanye ụlọ nkwari akụ ahụ nwere onyonyo na-eguzo n'akụkụ niile nke ebe obibi yana arịa ndị na-egosipụta ụdị mmiri dị na igodo ọgbara ọhụrụ. Ụdị etinyere bụ ihe eji achọ mma na ọmarịcha ihe owuwu ụlọ nke ejiri ihe eji arụ ọrụ n'ụsọ mmiri-Vesuvian lava, parquet flooring nke na-echeta stilts wuru n'oké osimiri, oriọna ndị ọkụ azụ, na ihe ịchọ mma na kabinet dị na ọla-ihe nhazi ya nwere. mgbọrọgwụ ya na omenala Neapolitan.
Ebe iri nri okpuru ulo nke ụlọ oriri na ọ Donụ Donụ Don Don Don Sophia - Photo © Mario Masciullo
Tụkwasị na nke a bụ mpaghara gastronomic na ngbanwe nke mbara ala ya ka ọ bụrụ SkyBar mara mma nke nwere nlele panoramic n'elu Bay nke Naples na Vesuvius ugwu mgbawa. Nnukwu ụgbọ mmiri ụgbọ mmiri dị maka ndị ọbịa maka njem gaa agwaetiti Capri dị nso ma ọ bụ ebe ọzọ. Ndozigharị na ọrụ ọhụụ gụnyere osimiri nkeonwe nwetara ụlọ nkwari akụ ahụ kpakpando ọzọ, na-eme ya taa ụlọ nkwari akụ 5.